Maalinta: Meey 19, 2019
Gaadiidka iyo baarkinka bartamaha magaalada ayaa deggan. Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Kulamadii Tahir Büyükakın ee uu la yeeshay Agaasinka Gobollada ee Waxbarashada Qaranka ayaa la soo gabagabeeyey. Marka uu soo jeediyo Madaxweyne Büyükakın, jardiinooyinka iskuulku hadda waa bilaash [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay qabataa dayactir iyo hagaajinta wadooyinka burburay iyo kuwa xumaaday. Macnaha guud ee '' dayactirka wadada iyo dayactirka shaqada '' qandaraaska waxaa loo qabtay degmooyinka Gölcük iyo Karamürsel. Soo bandhigida shirkadda 14 [More ...]
Xaalada cimilada ee xun awgeed, Agaasimaha Guud ee Hay'ada Duulista Hawada ee duulimaadyada tilmaanta ayaa yimid. Bayaanka ay soo saartay hay’adda; Xaalada cimilada dartiis, 468 waxaa isticmaali kara 8 madaarka Istanbul iyo Sabiha Gökçen Airport. [More ...]
AK Party, buundada udhaxeysa ciqaabta cafiska iyo gawaarida xamuulka ah ayaa lagu dabaqay canshuur dhimis xad dhaaf ah 10 kun oo rodol oo loo dhigay 15 kun oo ginni, oo ay kujirto soo jeedinta kiishashka cusub ee loo soo bandhigay Madaxtooyada Golaha. in u bixi [More ...]
Maanta Tram & Buses lacag la'aan ah Samsun!
SAMULAŞ A.Ş., oo ku xiran degmada Samsun ee Magaalo Weyn, ayaa ku dhawaaqday in taraamyada iyo basaska ay bilaash noqon doonaan inta lagu gudajiro Xuska 19 May Atatürk Xuska, Amplitude iyo Maalinta Ciyaaraha. Sharaxa laxiriirta waa sida soo socota; [More ...]
19 Bishii Maay 1919, Mustafa Kemal wuxuu Samsun u raacay Atatürk Bandırma Ferry maantana waa la aqbalay maalinta Dagaalkii Xornimada ee Turkiga oo looga soo horjeeday duulaankii ay ku galeen Wadamada Soofiyeeti. Atatürk ayaa u soo bandhigaysa fasaxaan dhalinyarada Turkiga [More ...]
Wadooyinka qaar ayaa loo xirayaa gaadiidka sababtoo ah 19 May xafladaha May ee Samsun
19 May Magaalada Samsun, halkaasoo Gazi Mustafa Kemal Atatürk uu ka bilaabay halganka qaran, xaflado badan ayaa loo qaban doonaa sannad-guurada 1919 ee 100. Xafladaha Madaxweynaha Recep Tayyip ERDOĞAN [More ...]
Maanta taariikhda: 19 May 1991 u dhaxaysa Haydarpaşa-Sapanca Taariikhda
Taariikh Maanta Maanta 19 May 1991 Nostalgic turjumaan uumis ah oo u dhaxeeya Haydarpaşa-Sapanca.